September 15, 2021 - Online Hartha
အိမ်မှာမအိပ်ရဲလို့ဆိုပြီး လမ်းမပေါ်ထွက်အိပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေးဧ။် သနားစရာ ဘဝဇာတ်ကြောင်း
September 15, 2021 by Online Hartha
အိမ်မှာမအိပ်ရဲလို့ဆိုပြီး လမ်းမပေါ်ထွက်အိပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်လေးဧ။် သနားစရာ ဘဝဇာတ်ကြောင်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Ha Giangပြည်နယ် ကျေးလက်ဒေသတွင် နေထိုင်သော အသက် ၄နှစ်အရွယ် ကောင်လေးသည် ဖခင်ဖြစ်သူဆုံးပါးသွားပြီးနောက်ပိုင်း မိခင်ကလည်း နောက်အိမ်ထောင်ထပ်ပြုခဲ့ရာ ဦးလေးလက်ထဲတွင် ကြီးပြင်းခဲ့ရသည်။ ဦးလေးဖြစ်သူမှာ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနှင့်အတူ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ သောက်စားမူးယစ်နေပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်တွင်လည်း ကောင်လေးအား အမြဲလိုလို ဆဲဆူကာ အော်ငေါက်နေသဖြင့် ကလေးလေးခမျာ ကြောက်ရွံ့နေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကောင်လေးသည် တစ်နေ့တွင် ဦးလေးဆူမှာကိုကြောက်ပြီး အိမ်မှာမအိပ်ရဲသဖြင့် ညဖက်အချိန်တွင် အဖွားဖြစ်သူဆီသွားနေရန် လမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လမ်းတစ်ဝက်မှာတင် ညောင်းလို့ဆိုပြီး လှဲချလိုက်ရာကနေ တစ်ခါတည်းအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကာ ဖြတ်သွားဖြတ်လာသူတစ်ဦးမှ မြင်ပြီး ဒေသရှိ ကလေးငယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ကံကောင်းစွာဖြင့် သားသမီးမရှိသော ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးမှ ကောင်လေးအား အုပ်ထိန်းသူများဧ။် ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ ခေါ်ယူမွေးစားခဲ့သည်။ Credit … Read more
ကိုယျဝနျသညျ သမငျမကွီးကပေးတဲ့ သငျခနျးစာ….
ကိုယ်ဝန်သည် သမင်မကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ တစ်ခါက သမင်မကြီးဟာ ကိုယ်ဝန် အရင့်အမာနဲ့ မွေးခါနီး ၊ ဖွားခါနီး ယာတောစပ်က မြစ်ကမ်းဘေးမှာ ထိုင်ချ လိုက်တယ်။ ကလေး မွေးတော့မယ့် ဆဲဆဲ အချိန်မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာချတယ် ။ မိုးနဲ့အတူ မုန်တိုင်းပါ ပါလာတဲ့အတွက် ကောင်းကင် တခွင်ဟာ ကြောက်စရာ ကောင်းလောက်အောင် မဲမှောင်ပြီး လျှပ်စီးတွေ လက်နေတယ်။ မုန်တိုင်းကြောင့် မြစ်ရေပြင် ဟာလည်း တဝုန်းဝုန်းနဲ့ ကြမ်းသထက် ကြမ်းလာတယ် ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ယာတောထဲကို မိုးကြိုးပစ်ချ လိုက်တဲ့ အခါ ယာတောခင်းကြီး ဟာလည်း မီးထ လောင်တယ် ။ သမင်မကြီးရဲ့အနောက်ဘက် မှာတော့ မုဆိုးတယောက်ဟာ မြှားနဲ့ ပစ်ဖို့ ချိန်ထားတယ် ။ … Read more
အချစ်ရဲ့ ဒုက္ခကို ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားခဲ့တဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်
အချစ်ရဲ့ ဒုက္ခ *ကို ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားတဲ့ ဆရာမရဲ့ အဖြစ် ထိုင်ဝမ်မှာ အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦးရှိပါတယ်။သူဟာ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ကောင်းတုန်းမှာပဲ ယောက်ျားဆုံးပါးသွားပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့ သားလေးတစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ သားလေးကို ဘထွေးနဲ့ မကြုံစေချင်လို့နောင်အိမ်ထောင်ထပ်မပြုပဲ အမေတစ်ခုသားတစ်ခုနဲ့ ပဲ သားလေးကို ပျိုးထောင်လာခဲ့ပါတယ်။သားလေးလည်း အလွန်လိမ္မာပါတယ်။အမေ့ကိုလည်း အလွန်သိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆရာမဝင်ငွေငွေလေးနဲ့ သားလေးကိုရှိစုမဲ့စု ပျိုးထောင်လာခဲ့ပါတယ်။သားကလည်း ထူးချွန်တာမို့ အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပညာတော်သင် စေလွတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကမှာ သားကလည်း ထူးချွန်ပါတယ်။ ကျောင်းပြီးလို့ အလုပ်ကောင်းပြီး အမေရိကမှာပဲအိမ်ထောင်ပြုပြီး ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်လုံး ဝယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြေးကလေးတစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူ ဆရာမကတော့ တာဝန်နဲ့မို့ဆရာမအဖြစ်ပဲ ထိုင်ဝမ်မှာ ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ဆရာမကြီးဟာ ပင်စင်ယူချိန်နီးလာပါတော့တယ်။ ပင်စင်ယူချိန်နီးလာလေလေ သားနဲ့ မြေးလေးကိုသတိရလေလေဖြစ်ပြီး သားလေးမိသားစုနဲ့သွားရောက်နေထိုင်ဖို့ ဆန္ဒပြင်းပြလာပါတယ်။ အမေ့ဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ သားလိမ္မာကြီးကိုသတိရပြီး ပီတိဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။သြော် လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်တွေ … Read more
အိမျတိုငျးမှာ အပျတဈခြောငျးလောကျတော့ ဆောငျထားသငျ့တဲ့အကွောငျးအရငျး
တ ရုတ် ပ ညာ ရှင် တွေ က အိမ် တိုင်း မှာ အပ် တစ် ချောင်း လောက် တော့ ဆောင် ထား သင့် တယ် လို့ ဆို ပါ တယ် ဘာ လို့ လဲ ဆို တော့ အပ် လေး တစ်ချောင်း က ပဲ လေ ဖြတ် သွား တဲ့ လူ နာ ကို ထူး ဆန်း စွာ ကု သ ပေး နိုင် လို့ ပါ။ ရုတ် တ ရက် လေ ဖြတ် သွား … Read more
နတ်ကိုင်ကြမ်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်က နတ်ရုပ်ကြီးကို တံတားလုပ်တက်နင်းဖြတ်တဲ့လူရဲ့အဖြစ်….
လူကောင်းကို အနိုင်ကျင့်ရတာ လွယ်တယ်ပုံပြင်ကလေးက ဒီလိုဗျ။ တခါက ရွာတရွာမှာ ရွာဦးနတ်ကွန်းဘေးမှာ ရေနှုတ်မြောင်း ဖြတ်စီးနေတယ်။ နတ်ကွန်းထဲက နတ်ရုပ်က မတ်တတ်ကိုယ်တော်ကြီး။ တနေ့တော့ လူတယောက်က မြောင်းဘောင်အတိုင်း လျှောက်လာပြီး ဟိုဘက်ကမ်းကို ကူးမယ်လုပ်တယ်။ အဲ့မြောင်းထဲမှာ ရေတော်တော်များနေတယ်။ ညက မိုးရွာထားတာကိုး။ ခုန်ကူးရအောင်ကလဲ မမီမကမ်းနဲ့။ မြောင်းထဲ ဆင်းကူးယင်လဲ ရေစိုမယ်လေ။ ပြီးတော့ ဒီလူကလဲ ခပ်ရွတ်ရွတ်ဆိုတော့ နတ်ကွန်းထဲက နတ်ရုပ်ကြီးကို ဆွဲချလာ၊ မြောင်းပေါ်ခွကျော်ပီး ချ၊ ပီးမှ နတ်ရုပ်ကြီးကို တုံးတံတားလုပ်ပြီး မြောင်းကို ကူးသွားတယ်။ ဟိုဘက်ကမ်းအဆင်းမှာ နတ်ရုပ်ကြီး မျက်နှာခွက်ကိုတောင် ဆောင့်နင်းသွားလိုက်သေးသတဲ့။ သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး။ လယ်သမားကြီးတယောက် ရောက်လာတယ်။ သူကတော့ နတ်ရုပ်ကြီးမျက်ခွက်မှာ ရွှံ့ခြေရာကြီး ပေနေတာ တွေ့တော့ မျက်စေ့တောင် ပျာခနဲ ဖြစ်သွားပီး … Read more